Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Soo-kabashada Qunyar-socodka ah ee Safarkii Hawada ee Shirkadda-COVID kadib
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Iyada oo dillaaca COVID-19 uu ku qasbayo adduunka shirkadaha inay ka shaqeeyaan istiraatiijiyadaha qiime dhimista, kharashaadka safarka ayaa la filayaa inay la kulmaan maareyn sare si loo ogaado fursadaha badbaadinta kharashyada cusub.
Sababo la xiriira dillaaca COVID-19, shirkaduhu waxay raadinayaan qaabab ay dib ugu dhimayaan kharashaadkooda.
Kahor aafo-aafeedka, socotada shirkadu waxay matalayeen kala bar dhammaan dakhliga ugu weyn ee diyaaradda.
Socdaalka diyaaradda ee meheradda ayaa la filayaa inuu si joogto ah hoos ugu dhaco boqolkiiba 19.
Iyada oo dakhligu ku dhacay dillaaca COVID-19, shirkaduhu waxay raadinayaan qaabab ay dib ugu dhimayaan kharashaadkooda. Tani waxay dareen gelisay safarka hawada ee shirkadaha. Faafida ka hor, safarayaasha shirkadu waxay matalayeen kala bar dhammaan dakhliga ugu weyn ee duulimaadyada, oo u dhiganta 1.7 boqolkiiba GDP-ga adduunka. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatada taagan awgeed, safarka diyaaradda ee meheradda ayaa la filayaa inuu si joogto ah hoos ugu dhaco boqolkiiba 19.
Markii xayiraadaha safarka lagu soo rogay adduunka oo dhan, meheraduhu waxay beddeleen shirar toos ah oo lala yeesho kuwa dalwaddu si loo xakameeyo faafitaanka masiibada. Ganacsiyo badan ayaa la qabsadey shirar fool-ka-fool ah waxayna ogaadeen in dhammaan kulammadu aysan ahayn inay ahaadaan shaqsi ahaan. Ganacsatadu sidoo kale waxay ogaadeen kharash aad u badan oo ku baxa qarashka safarka hawada.
Mustaqbalka, safarka diyaaraduhu wuxuu noqon doonaa mid aad looga fikiro oo laga fikiro si loo safro, taas oo u oggolaanaysa shaqaalaha inay lahaadaan isku dheelitirnaan nololeed oo wanaagsan iyo loo-shaqeeyayaashu inay si wanaagsan ugu soo laabtaan maalgashiga.
Shirkaduhu waxay qabanqaabinayaan shirar fool -ka -fool ah oo qaabkani aad buu u doorbiday qaar badan oo iyaga ka mid ah. Waxay garwaaqsadeen in shirarka qof ahaaneed aan mar walba loo baahnayn. Qaabka shaqada isku-dhafan ee masiibada ka dib oo isku daraya weji-ka-wejiga iyo qaab-dhismeedyada dalwaddu waxay ka dhigi karaan meheradaha mid guuleysta iyada oo xaddidaysa kharashaadka safarka ee shirkadda. Shaqaaluhu waa inay safraan kaliya marka ay daruuri tahay. Waa kuwan qaar ka mid ah tillaabooyinka ay qaadayaan shirkaduhu si loo yareeyo safarka ganacsiga diyaaradda iyo xoojinta dakhliga:
Maamulka Qiimaha: Ku dhawaad ​​warshado kasta waxay wajahayaan dhibaato sababtuna tahay masiibada ilaa heerar kala duwan Taas, shirkaduhu waxay si firfircoon u eegayaan tallaabooyinka dakhli-abuurka meel kasta oo ay suurtogal tahay. Xaddididda safarka ganacsiga ayaa ugu sarreeya liiskooda, halkaas oo ay ku baajinayaan dhammaan safarada aan muhiimka ahayn.